मध्यरात अर्काको घरभित्र पसेको चोर बिहानसम्म मस्त ओछ्यानमा ! « Drishti News – Nepalese News Portal
मध्यरात अर्काको घरभित्र पसेको चोर बिहानसम्म मस्त ओछ्यानमा !
थाइल्याण्ड । अर्काको घरमा प्रवेश गरेको चोरले प्राय अरुले थाहा नपाई सामान कुम्ल्याएर भाग्ने गर्छन् । तर थाइल्याण्डमा एउटा घरमा चोरीका लागि पसेको चोर भने बिहानसम्म सोही घरमै आनन्दले बसेको अनौठो घटना सार्वजनिक भएको हो ।
२२ मार्चको रात फेचाबुन प्रान्तको विचेनबुरी जिल्लाको एउटा घरमा चोर पसेको थियो । राति करिब दुई बजे घरभित्र प्रवेश गरेको उक्त चोर बिहानसम्म सोही घरमा मस्तसँग ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्थामा फेला परेको थाइल्याण्डका सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ ।